NextMapping | भविष्य कार्यस्थल टाढाको र अफिसमा कामदारहरूको संकर हो
हामीले यसका बारे धेरै कुरा सुनेका छौं 'नयाँ सामान्य' महामारीको सुरुदेखि नै। वास्तविकतामा कसैलाई पनि थाहा छैन कि त्यो नयाँ सामान्य कस्तो देखिन्छ।
अहिले हामी सामाजिक क्रान्तिमा जाँदै छौं। महामारीले कामदारहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूको लागि के काम गर्दछ त्यसको पुनर्मूल्यांकन गर्न बाध्य पार्दैछ।
नियोक्ताहरूले घरको वास्तविकताबाट छिटो काममा अनुकूलित भएका छन्। तिनीहरूले पत्ता लगाए कि यो सम्भव छ र टाढाका कामदारहरू पाउन पनि लाभदायक छ।
कोभिड १ to भन्दा अघि धेरै कामदारहरूले अनुरोध गर्दै थिए टाढाको काममा वृद्धि .
धेरै केसहरूमा रोजगारदाताहरूले टाढाको काम अनुरोधलाई जवाफ दिनेछन् कि यो सम्भव छैन।
अब र भविष्यमा तथ्य यो छ कि टाढाको काम यहाँ रहनको लागि छ।
अनुसन्धान पत्ता लगाएको छ कि सर्वेक्षण गरिएको दुई तिहाइ कामदारहरूले टाढाबाट बढी उत्पादनशील काम गरिरहेको महसुस गर्छन्। एउटा लेनोवो रिपोर्टले पत्ता लगायो कि सर्वेक्षण गरिएको 52२% लाई घरबाट काम गर्नु नै 'नयाँ सामान्य' जस्तो लाग्यो।
टाढाबाट काम गर्ने मजदुरहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घर अवरोधका साथ मानसिक रूपमा व्यवहार गर्नु थियो कल्याणकारी चुनौतिहरू।
वास्तविकतामा नयाँ सामान्य भविष्यको कार्यस्थल टाढा र अफिसमा कामदारहरूको संकर हो।
नेताहरु को लागी रणनीतिकीकरण र अब संकर कार्यस्थल कस्तो देखिन्छ को लागी योजना गर्न को लागी एक अवसर छ।
त्यसोभए कम्पनीहरूले कसरी पोस्ट महामारी वास्तविकतामा संकर कार्यस्थलको लागि योजना बनाउन सक्दछन्? यहाँ केहि सुझावहरू छन्:
कम्पनीका नेताहरूसँग अहिले आफ्नै अवसरहरू छन् जुन उनीहरूको कामदारहरूले अहिले गरिरहेछन् भन्ने सम्बन्धमा आफ्नै अनुसन्धान र डाटा संकलन गर्न। यसले सर्वेक्षण र पोलहरू समावेश गर्दछ कसरी श्रमिकहरूले टाढाबाट काम गरिरहेको महसुस गरिरहेका छन्।
दुबै अफिस र दुर्गम कार्यस्थलमा काम गर्ने दुबै कम्पनीहरूका लागि त्यहाँ कती राम्ररी चलिरहेको छ भनेर मूल्या to्कन गर्ने अवसर छ। नेताहरूले के काम गरिरहेको छ र के काम गरिरहेको छैन भन्ने बारे एक कुराकानीमा एक मा anecdotal डाटा भेला गर्न सक्छन्।
महामारीको सामाजिक प्रभावको साथ यसको महत्त्वपूर्ण कुरा कि नेताहरू उनीहरूको व्यक्तिगत कार्यकर्ता प्रतिक्रिया र यथार्थप्रति संवेदनशील हुन्छन्। उदाहरण को लागी अभिभावक बिदा मा एक अभिभावक टाढा टाढा 60% र कार्यालय मा समय को 40% काम गर्न चाह्न सक्छ। सबै कामदारहरूको लागि उत्तम सम्भावित विकल्पहरू सिर्जना गर्न व्यक्तिगत प्राथमिकता डेटा जम्मा गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ।
आदर्श हाइब्रिड कार्यस्थलले व्यक्तिगत रूपमा बैठकमा भेला हुने भेला गर्ने सही सन्तुलनलाई ध्यान दिनेछ। निर्णयहरू आधार मापदण्ड बनाउने जब व्यक्ति मा भेट्न वा लगभग सबैलाई समान पृष्ठमा हुन सहयोग गर्दछ।
संकर कार्यस्थललाई प्रदर्शन मापन हेर्ने नयाँ तरिका आवश्यक पर्दछ। त्यहाँ हाइब्रिड संरचनामा कर्मचारी प्रभावकारिता मापन गर्न नयाँ मेट्रिक्स पहिचान गर्ने अवसर छ। म भविष्यवाणी गर्छु कि एआई संग, वास्तविक समय डाटा, बैठक एआई विश्लेषण कि त्यहाँ अधिक डाटा हुनेछ जो संग कामदार सफलता को पहिचान गर्न को लागी। जबकि प्रदर्शनको टेक्नोलोजी मापन कामदारहरूको योगदानको मात्र सूचक होईन। त्यहाँ कामदारले कसरी टोलीमा वा ग्राहकको सफलतामा योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने आधारमा साथीहरूको समीक्षामा वृद्धि हुन आवश्यक छ।
हामी कहाँ जाँदैछौं भन्ने बारे कुनै प्रश्न छैन 'अर्को सामान्य' त्यो आकार र कार्यकर्ता प्राथमिकताहरू द्वारा नेतृत्व गरिनेछ।
कम्पनीहरूले कामदारलाई चाहने र चाहिने चीजहरूमा द्रुत रूपले अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दछ। जबकि विगतमा यो रोजगारदाताले आचार संहिता र योजनाको नियमहरू सेट गरे जुन मैले पूर्वानुमान गरेको यो कामदारले निर्धारित गर्ने छ जब काम हुन्छ, यो कसरी हुन्छ र काम गर्ने उत्तम ठाउँ पनि हो।